Sida loo arko maabka xaaladaha ku jira abka Cimilada ee la cusboonaysiiyay ee iOS 15 | BehMaster
Bogga ugu weyn/iPhone/Sida loo arko maabka xaaladaha ku jira abka Cimilada ee la cusboonaysiiyay ee iOS 15
Sida loo arko maabka xaaladaha ku jira abka Cimilada ee la cusboonaysiiyay ee iOS 15
Cusbooneysiinta cusub ee iOS 15 ee la keenay Sebtembar waxaa ka mid ah barnaamij cimilo oo la cusboonaysiiyay oo leh astaamo xiiso leh oo faa'iido leh. Mid ka mid ah kuwan waa khariidad cusub oo roobab ah oo ku tusi doonta sida saxda ah meesha ay tahay, oo noqon doonta, roob (ama baraf da'aya) aaggaaga - ama meel kasta.
Waxa kale oo aad si la mid ah u arki kartaa maabyada Heerkulka iyo tayada hawada. Waan ku tusi doonaa sida.
Tilmaamo cusub oo ku jira abka Cimilada
Ku darida Apple's Weather app waxay u badan tahay inay si toos ah ula socdaan iibsashada shirkadu ee cimiladu app-ka caanka ah ee Dark Sky sannadkii hore.
Si aad u aragto khariidadaha cimilada ee roobabka, heerkulka iyo tusmada tayada hawada (AQI), waa inaad ku socotaa iOS 15, dabiici ahaan. Way fududahay in la cusboonaysiiyo iPhone-ka OS, nasiib wanaag. Waxaan ku dari doonaa talaabooyinka hoose.
Sida loo arko maabka xaalada abka Cimilada
Halkee iyo goorma ayuu da'ayaa?
Haddii aadan weli iPhone kaaga u cusboonaysiin iOS 15, waxaad sidaas ku samayn kartaa adigoo tagaya Settings > General > Cusbooneysiinta Barnaamijka.
Fur fur App app (Waxay ku timaaddaa preinstalled on iPhone kasta).
Guji kan yar icon khariidad dhinaca hoose ee bidix ee shaashadda.
Guji saddexda yaryar, afar geesood is dulsaaran dhanka midig ee sare ee shaashadda.
Dooro Heerkulka, Roobka or Tayada hawada.
Khariidadda la doortay waxay la soo bixi doontaa xaalado hadda jira.
Si aad waqtiga ugu gudubto khariidadda Roobka, dhaqaaji saadaasha saadaasha 12-saacadood xagga hoose ee shaashadda bidix ama midig. Taasi waxay tusinaysaa daruur kasta oo roob-da'aya oo ku wareegaysa gobolka nus-maalinta soo socota.
Khariidad kastaa waxay muujinaysaa a cabirid dhanka bidix ee sare oo muujinaya midabada darnaanta xaaladaha.
Adiguba waad awoodaa Mozilla in or ka fogee adigoo isticmaalaya tilmaanta qanjaruufo ee farahaaga si aad u aragto heerar kala duwan oo faahfaahsan oo ku saabsan xaaladaha cimilada.
AirPods 3 waxay leedahay kiis dallacaadda u adkaysta biyaha
Harry, iyo saaxir [warbixinta]; Isniinta kooban ee maalinlaha ah